पश्चिमी वायुका कारण पुनः वर्षा, अझै केही दिन मौसम सफा नहुने - Narayanionline.com Narayanionline.com पश्चिमी वायुका कारण पुनः वर्षा, अझै केही दिन मौसम सफा नहुने - Narayanionline.com
भरतपुर २३ को लक्ष्मी माविको गेट ढलेर विद्यार्थी घाइते
के हो समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको नाइरोबी फ्लाई ? किराले कसरी संक्रमण गराउन सक्छ ?
भरतपुरमा दुई दिने रोजगार मेला सकियो, दुई हजार ८१३ जनाले गरे रोजगारको आवेदन
चितवनमा विकास खर्च न्यून, अहिलेसम्म संघ र प्रदेशको गरेर जम्मा ५३ प्रतिशत मात्र खर्च
पश्चिमी वायुका कारण पुनः वर्षा, अझै केही दिन मौसम सफा नहुने
२६ चैत्र २०७५, मंगलबार
काठमाडौं– पश्चिमी वायुको प्रभावले आज बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ ।
पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको सम्मिश्रणको प्रभावले पुनः वर्षा दोहोरिएको मौसमविद् मञ्जु बासीले बताइन् । अहिले पूर्वी क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय रेखा र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा तथा स्थानीय वायुको प्रभावले बदलीसँगै हावाहुरी र वर्षा भइरहेको मौसमविद् बासीको भनाइ छ ।
आज देशभरि नै हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने बताइएको छ । प्रिमनसुनको समयमा मध्याह्नपछि मेघगर्जन, हल्का वर्षा, हावाहुरी चल्ने र चट्याङ पर्ने सामान्य गतिविधि हो । तर अहिले विभिन्न प्रणाली मिसिएर मौसम प्रभावी भइरहेको मौसमविद्को भनाइ छ । यस प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन मौसम पूर्णरूपमा सफा हुने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
भोलि देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रही अपराह्नपश्चात् मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले जनाएको छ । बिहीबार देशका पूर्वी र मध्य भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ ।
उत्कृष्ट सर्ट फिल्म खोज्दै एनएनटीभी
चितवनको कालिकामा रोपाइँ गर्न गएका १४ जना चट्याङ लागेर घाइते